Wararka Gudaha – Page 111 – Shabakadda Amiirnuur
Siyaasi Cabdi Barre: “Xalane Waxaa Ka Furan Xafiisyo Qabaa’ilka Lagu Kala Shiriyo” (Dhageyso)
Siyaasiga Cabdi Barre oo kamid ah xildhibaanadii hore ee Baarlamaanka ayaa shaaca ka qaaday in dalka Soomaaliya uu gumeysi ku jiro una baahan yahay in la badbaadiyo. Isagoo hadal ka jeedinayay shir ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in maamul goboleedyadu qeyb weyn ka yihiin kala qoqobnaanta […]
Wararkii Ugu Dambeeyay Dagaalo Iyo Weeraro Ka Dhacay Bakool Iyo Sh/dhexe.
Ciidamada Xarakada Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro ka fuliyay gobolada Bakool iyo Shabeelaha dhexe iyadoo weeraray ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda federalka ah. Weerarka Waajid wuxuu ahaa duqeyn lala bar tilmaameedsanayay saldhigga ciidamada Xabashida Itoobiya waxaana ay dadka degaanka sheegeen in madaafiic aad u badan ay ku hoobteen saldhigga inkastoo […]
Imaarada Islaamiga ah oo baahisay tirakoobka howlgalladii sanadkii 2017 ka dhacay dalka Afqaanistaan.
Qoraal kooban oo kasoo baxay lajnada warfaafinta ee Imaarada Islaamiga ee Afqaanistaan ayaa lagu soo gudbiyay tirakoobka howlgalladii jihaadiga ee sanadkii dhamaaday ee 2017 ka dhacay guud ahaan gobollada kala duwan ee wadankaas. Tirade guud ee howlgalladu waxay gaarayaan 7503 howlgal, 48 kamid ahna waa camaliyaad Istish-haadi ah oo ay […]
Daawo Vedio: Sh/Nuur Baaruud oo U Goodiyay Shaqsiyaad Soomaali Kiristan Ah oo Muqdisho Ku Sugan.
Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo kamid ah wadaadada dowladda u shaqeeya ayaa shaaca ka qaaday in ay jiraan shaqsiyaad heysta diinta Kiristanka kuwaasoo ku nool magaalada Muqdisho. Inkastoo uusan sheegin halka ay deggan yihiin iyo xogtooda hoose ayaa waxaa jiray in hadda ka hor uu sheegay in ay meel madal […]
Degdeg: Qarax Khasaare Geystay oo Amisom Lagula Beegsaday Magaalada Muqdisho.
Qarax ayaa magaalada Muqdisho lagula beegsaday kolonyo gaadiid ah oo wateen ciidamada shisheeye ee Amisom xilli ay marayeen inta u dhaxaysa Wasaaradda gaashaadhigga iyo Kuliyaddii Jaalle Siyaad. Goob joogayaal ayaa sheegay in qarax uu haleelay mid kamid ah kolonyada kaasoo gabi ahaanba burburay, waxaana xigay rasaas ay jiho walba u […]
Amisom oo Xaqiijisay In Kun Askari oo Ciidamadeeda Ah Laga Saaray Soomaaliya.
Taliska ciidamada Amiosm ayaa shaaca ka qaaday in ay hir galiyeen ballan qaadkoodii ahaa in ay dabayaaqada sannadkan maanta ku eg iyo bilowga sannadka berri billaabanaya ay Soomaaliya ka duulin doonaan in ka badan kun askari oo ciidamadooda ah. Dowladda Uganda ayaa shaaca ka qaaday in tirada ciidamadii kaga soo […]
« Previous 1 … 109 110 111 112 113 … 124 Next »